China Jet Micron Grader Ho an'ny fanasokajiana ireo orinasa sy mpanamboatra | Qiangdi
Ny mpiorina turbine, amin'ny maha kilasy centrifugal an-tsokosoko miditra amin'ny rivotra faharoa sy ny rotary grading rotator dia misy grady rotator, guide vane rectifier ary screw feeder. Ny fitaovana dia omena amin'ny alàlan'ny cartridge ambony, ary ny voam-bary dia hohasiana ary zarain'ny rivotra miditra, izay mitondra ny voam-bary any amin'ny faritra fanaovana grady. Ny hery centrifugal novokarin'ny fihodinan'ny fihodinan'ny grading rotator miaraka amin'ny hery centripetal novokarin'ny adhesion pneumatika dia samy mihetsika amin'ny voamaina. Rehefa lehibe kokoa noho ny hery centripetal ny hery centrifugal amin'ny voamaina, dia hiparitaka manaraka ny rindrin'ny kaontenera ny voam-bolo. Ny rivotra faharoa dia ahitsy ho sikilona fanamiana amin'ny alàlan'ny vaneur guide ary hampisaraka ireo voamadinika manify amin'ny coarserones. Ireo varimbazaha coarser misaraka dia hitsoka avy ao amin'ny seranan-tsambo. Ny voamaina manify dia ho tonga amin'ny Separator Separator sy collector, fa ny rivotra voadio kosa dia avoaka ivelan'ny drafitra.
1 .Mifanaraka amin'ny karazana milina fanaovana vovo-dronono maina (jet mill, mill mill, mill Raymond) hamoronana faritra mihidy.
2. Ampiharina amin'ny fanasokajiana tsara ny vokatra marron-na maina toy ny baolina, flake, fanjaitra ary sombintsombin'ny hakitroka samihafa.
3. Ny rotor fanasokajiana endrika farany dia ampiasaina, izay fanatsarana lehibe amin'ny fanasokajiana ny haben'ny sombin-javatra raha oharina amin'ny vokatra taloha, miaraka amin'ny tombony toy ny grady fetra avo lenta sy ny haben'ny potika azo ovaina ary ny fanoloana karazany tena mety. fitaovana turbine avo lenta misy haingam-pandeha ambany, fanoherana ny fitafy ary herin'ny rafitra ambany.
4. ny rafitra mifehy dia mandeha ho azy, ny fepetra mihazakazaka dia aseho amin'ny fotoana tena izy, mora dia haingana ny fandidiana.
5. ny rafitra dia mihazakazaka eo ambanin'ny tsindry ratsy, ny famoahana vovoka dia latsaky ny 40mg / m, ny tabataban'ny fitaovana tsy mihoatra ny 60db (A) amin'ny alàlan'ny fandrefesana ny fandrefesana ny tabataba.
Mamolavola fizotran'ny dingana samihafa arakaraka ny fitaovana sy ny fahaizany
Santionany amin'ny fampiharana ampahany
Teo aloha: Nitrogen Protection Jet Mill System Ho an'ny fitaovana manokana
Manaraka: Ireo singa ho an'ny Jet Mil